Ababhalisile be-YouTube bamahhala | Ukuthandwa kwamahhala kwe-YouTube
Thenga isivumelwano sephakheji
Thenga i-YouTube Graphic yangokwezifiso
Ababhalisile bamahhala be-YouTube nokuthandwa kwama-YouTube kwamahhala
Thuthukisa Ukukhula Kwesiteshi Sakho se-YouTube Namuhla!
Inethiwekhi yethu elula ikuvumela ukuthi uthole ababhalisile be-YouTube nokuthandwa kwesiteshi sakho. Izinketho ezinhle kakhulu ezikhokhelwe zokukhula okungenamandla ziyatholakala.
Thola Ababhalisile be-YouTube bamahhala or Thenga ababhalisile be-YouTube
Landela lezi zinyathelo ezilula futhi ukhulise ukukhula kwesiteshi sakho se-YouTube ngemizuzu!
Isinyathelo 1. Bhalisela & Ukungena
Isinyathelo 2. Yenza uhlelo lusebenze
Isinyathelo 3. Thuthukisa Isiteshi Sakho
Uma ungenankinga ngokuthatha imizuzu embalwa usuku ngalunye ukwenza uhlelo lwenziwe, sinikeza izinketho ezinhle kakhulu eziletha kufika kwababhalisele mahhala abayi-10 nokuthandwa kwamahhala kwe-YouTube kwama-20 ngosuku.
Abakwa-YouTubers njengawe basebenzisa le nsizakalo yokushintshanisa ukuthola ababhalisile emuva naphambili phakathi kwamanye ama-YouTubers.
Insizakalo yeSoNuker iphephile futhi ivikelekile! Iziteshi ze-YouTube azihlawuliswa ngokusebenzisa isevisi yethu futhi sisebenza ngobumfihlo, ukuphepha nokugcina imfihlo ngokuqinile.
Uma ukhetha ukuzikhandla futhi uzitholele ngokuzenzakalela ababhalisile be-YouTube nokuthandwa kwamavidiyo usuku ngalunye, lapho-ke sincoma uhlelo olukhokhelwayo lokuthola umzamo omkhulu, ukukhula kwansuku zonke!
Inethiwekhi yethu yakhelwe ukuthi ibe eyisisekelo ngokweqile futhi ibe lula ukuthi wonke umuntu ayisebenzise. Bhalisa i-akhawunti, ungene ngemvume futhi konke okunye kuyazichaza!
Ithimba lethu losizo elinobungani lilapha ukuzosiza! Unombuzo, ubeke amazwana, noma ukukhathazeka? Siyi-imeyili elula futhi siphendula yonke imibuzo ngaphakathi kwamahora angama-24-72.
Ngifuna Ababhalisile Bamahhala Nokuthandwa Manje!
Kungani Usebenzisa i-SoNuker?
I-SoNuker inikeza inethiwekhi entsha ekuvumela ukuthi uthole ngokushesha futhi kalula Ababhalisile abangu-10 bama-YouTube mahhala futhi Ukuthandwa okungu-10 kwama-YouTube kwamahhala njalo emahoreni ayi-12! Izinhlelo ezikhokhelwayo ziyatholakala, kepha izinhlelo zamahhala zisasebenza kakhulu ekukhuliseni isiteshi sakho. Awudingi ukungena ku-akhawunti yakho ye-YouTube ukuze ungene kwiwebhusayithi yethu, ugcine imininingwane yakho yesiteshi se-YouTube iphephile futhi ivikelekile.
I-SoNuker yenzelwe ukuthi ibe lula ngangokunokwenzeka ngobuntu! Isikhathi sakho sibalulekile futhi siyakuqonda lokho. Ukwamukela ababhalisile be-YouTube mahhala nokuthandwa, vele uthande bese ubhalisela ezinye iziteshi ezingama-20. Uzothola ababhalisile bakho kungakapheli amahora angu-12 futhi ungaphinda le nqubo njalo emahoreni ayi-12 wokukhula okuqhubekayo.
Ungabona imiphumela ngokushesha!
Lapho wenza kusebenze uhlelo lwamahhala noma olukhokhelwayo, uzobona ababhalisile bakho beqala ukwanda ngokushesha. Ngesandla kusebenze uhlelo lwamahhala njalo emahoreni ayi-12, noma sebenzisa uhlelo olukhokhelwayo oluzenzakalelayo olungu-100%. Yenza kusebenze uhlelo olukhokhelwayo bese uthola ngokuzenzakalela ababhalisile nsuku zonke!
Izinhlelo Zokukhula ze-YouTube
Yenza kusebenze manje
Thola ababhalisile abayi-5 emahoreni ayi-12
Ubhalisa futhi uthanda amavidiyo angama-6
Wena Usebenzisa Uhlelo Lokusebenza
Yenza kusebenze i-1x Njalo ngehora le-12
Ukubalwa Kwababhalisile Kufanele Kubesesidlangalaleni
Kufanele Ube Namavidiyo angu-1 + athunyelwe
Yekani ukusebenzisa nganoma yisiphi isikhathi!
Thola ababhalisile abangama-10-15 Nsuku Zonke!
Ubhalisa futhi uthanda amavidiyo angama-0
Isebenza Ngayo Zonke Izinsuku
Khansela nganoma yisiphi isikhathi!
Thola ababhalisile abangama-20-30 Nsuku Zonke!
Thola ababhalisile abangama-40-60 Nsuku Zonke!
Amaphutha Okufanele Uwagweme Lapho Ufuna Ababhalisile Abakhululekile Be-YouTube
Ingabe uyi-YouTuber efuna ukukhulisa isiteshi sayo ngokushesha? Njengoba amakhulu eziteshi ze-YouTube eqalwa nsuku zonke, ukugqama ku-YouTube manje sekunzima kakhulu kunakuqala. Ungasebenza kanzima kakhulu kokuqukethwe kwakho, bese uthola ukuthi imibono yakho iyenqaba ukweqa izinombolo ezine. Epulatifomu lapho abantu bethola izigidi zokubukwa nezindaba zempumelelo ezungeze wonke amakhona, uba kanjani omunye walabo abaphumelelayo?
Ukuba neqembu elizimisele lababhalisile be-YouTube kungahle kube yilokho okudingayo uma uzithola uzizwa udangele ngokukhula kancane kwesiteshi sakho. Ngaphandle kwababhalisi bamahhala, nangokuqukethwe okuhle, usengathemba ukuthi isiteshi sakho singakhula ngokuhamba kwesikhathi. Kuyenzeka njalo, kepha futhi akwenzeki kubantu abaningi. Yilapho ababhalisile bamahhala nokuthandwa kwamahhala kunganikeza isiteshi sakho ukuvezwa esikudingayo.
Kungani Uthola Ababhalisile Bamahhala be-YouTube?
Indlela enhle yokunikeza isiteshi sakho se-YouTube ukucindezela kusenesikhathi ngosizo lwababhalisile be-YouTube. Ekugcineni, isibalo sababhalisile isiteshi sakho esinaso, sinezwi elikhulu ekutheni uphumelela kangakanani endaweni yesikhulumi. Kungakhuthaza ababhalisi be-YouTube bangempela ukuthi babhalisele nesiteshi sakho. Uma usuqedile kahle, ababhalisile bakho be-YouTube bangakunika amandla wokukala isiteshi sakho se-YouTube ngokushesha okukhulu kunalokho obekulindelekile.
Lapho umuntu obhalisile ku-YouTube etholakala ngevidiyo, bazoma ukuze bahlole ukuthandwa nokubukwa kwevidiyo yakho. Babheka nenani lababhalisile esiteshini sakho. Uma isiteshi sakho sibukeka sengathi sinababhalisile abaningi, lokhu kunganikeza ukubonakala sengathi ungumuntu abantu abaningi abamlandelayo nabamethembayo. Leli ithuba, limema ababhalisile be-YouTube bangempela ukuthi bathande amavidiyo akho futhi babhalise kokuqukethwe kwakho.
Ukhiye wokusebenzisa ngempumelelo ababhalisile be-YouTube ukukala isiteshi sakho se-YouTube ukukhulisa isiteshi sakho ngokungaguquguquki esikhathini esinqunyiwe. Uma abantu bethola ukuthi ngokungazelelwe uthole abalandeli abangu-100,000 ngobusuku obubodwa, khona-ke lokhu kungabonakala kusolisa. Uma lokhu kwenzeka, ungalindela ukuthi abanye abantu badabule okuqukethwe kwakho ukuze baqonde ukuthi kungani uthole ababhalisile abaningi kangaka ngokushesha okukhulu. Uma ungenazo izingcezu zegciwane lokuqukethwe ezingachaza lokho kukhula, bangaqonda ukuthi ababhalisile abalona iqiniso.
Esikhundleni salokho, ungasabalalisa ababhalisile bakho be-YouTube bamahhala ukufinyelela kuleyo nombolo, ngaphandle kokuthi kuvuse izinsolo. ISoNuker yipulatifomu ekuvumela ukuthi wenze lokho kanye. Ngokukhula okuzinzile kwabalandeli ababalelwa eshumini kuya kwabangamashumi amabili usuku ngalunye, ungalindela ukubona ukukhuphuka okungaguquki kwesibalo sababhalisile bakho be-YouTube. Ijubane kulokhu liyenzeka, noma lisakazeka isikhathi eside, lisashesha kakhulu uma liqhathaniswa nokukala isiteshi sakho ngokwemvelo.
Isizathu salokhu ukuthi abantu sebenakho okuqukethwe okwanele kwekhwalithi enhle okuvela eziteshini ezidumile ze-YouTube abangakujabulela. Ngakho-ke uma ufuna ukudonsela ukunaka kwabo kuwe, indlela ephumelelayo yokufeza lokhu inkohliso yokuthi usuvele unokunaka okufunayo. Empeleni, kungumbombayi uze uwenze amandla, ngaphandle kokuthi kusebenza ukuletha ababhalisile abasha be-YouTube, ukubukwa nokuthandwa esiteshini sakho.
Ngenkathi ukuthola ababhalisile abaningi be-YouTube maduzane kuyiphutha eliyinhloko abantu abaningi abavame ukulenza, akuyona kuphela. Nakhu okufanele ukwazi ngamaphutha okufanele uwagweme lapho uthola ababhalisile be-YouTube, futhi ngani.
1. Akukho Ukuzibandakanya Okuvela Kubabhalisile
Isiteshi esinababhalisi abayizigidi kodwa singenakho ukuphawula noma ukuthandwa kumavidiyo amaningi, futhi mhlawumbe ukubukwa okungamakhulu ambalwa kumavidiyo amaningi kubukeka kuyinhlanzi, akunjalo? Lapho uthola ababhalisile be-YouTube, udinga futhi ukugcina isilinganiso phakathi kwababhalisile, ukuthandwa, ukuphawula nokubukwa.
Ngenkathi ukuphawula nokuthandwa kungahluka phakathi kwamavidiyo, kufanele kubonise ukuthambekela. Lokhu kuvame ukuza ngendlela yokubona inani elilinganiselwe lamazwana kuvidiyo ngayinye. Isibalo sakho sokubuka sihlala siphezulu kunenani lezintandokazi namazwana amavidiyo akho awatholayo. Inani lokuthandwa okutholwa amavidiyo akho nalo lizoba ngaphezulu kunenani lamazwana. Okufanelekile, kufanele ube nokuthandwa okuningi kunokungathandi kuvidiyo yakho. Ukungathandi okuningi kakhulu kungabonisa okubi futhi kuvimbele ababukeli be-YouTube ekubhaliseni esiteshini sakho.
NgeSoNuker, awutholi ababhalisile be-YouTube kuphela, kodwa futhi nokuthandwa yi-YouTube. Lokhu kukusiza ukuthi ugcine ukulingana phakathi kokubukwa nokuthandwa okudingayo, ukunikeza ukubonakala kwesiteshi esiphumelelayo neshesha ngokushesha.
Esinye isici okufanele usicabangele ukucabanga ukuqonda okulindele kwababhalisile bakho be-YouTube. Uma ulindele ukuthi baziphathe njengababhalisi bangempela, ungahle udumazeke. Ababhalisile bamahhala be-YouTube bangeza ngezindlela ezimbili.
Eyokuqala yalezi ama-bots. Lezi iziteshi ze-YouTube ezenzelwe inhloso ethile yokwakha isibalo sababhalisile beziteshi ezahlukahlukene ze-YouTube. Bajwayele ukungabi nazo izithombe zephrofayili, noma isithombe sesitoko esisobala. Abaningi bavame ukushiya ngemuva imibono engogaxekile kumavidiyo akho. Lokhu kungaba yingozi, ngoba kungavimba ngokushesha abantu abaningi ekubhaliseleni isiteshi sakho. I-YouTube nayo inenqubomgomo eqinile maqondana nama-akhawunti anjalo. Ngakho-ke noma ngabe ufuna ababhalisile be-YouTube, gwema amapulatifomu abanikeza ngama-bots.
Enye indlela ukuhlangana ngqo nabanye abadali bokuqukethwe be-YouTube abafuna ukukala nokukhulisa iziteshi zabo ngendlela efanayo nawe. Ababhalisile be-YouTube obatholayo bangaxhumana kakhulu nesiteshi sakho, kepha bangama-akhawunti angempela. Abaningi bazokushiya ukuthandwa yi-YouTube uma ubenzela okufanayo.
Ngokuhamba kwesikhathi, ukwengezwa kwalabo ababhalisile be-YouTube kungenza isiteshi sakho sizuze ukuvezwa okufunayo. Lokhu kunjengoba i-algorithm ye-YouTube izoqala ukubona ukuthi ama-akhawunti ahlukahlukene ahlukahlukene abhalisela isiteshi sakho futhi athande amavidiyo akho.
Uma ukhathazekile ngokuba nenani eliphansi lamazwana kumavidiyo akho futhi, cabanga ngokucela ababhalisile bakho be-YouTube ukuthi basize. Epulatifomu efana ne-SoNuker, ungasebenzisana nabanye abadali bokuqukethwe be-YouTube ukukhulisa ukukhula kwesiteshi sakho se-YouTube. Uma kukhulunywa ngokushintshisana okunjalo, kufanele futhi ucabange ukuthi kulindeleke ukuthi usize nabanye abadali bokuqukethwe.
3. Lokho Ababhalisile be-YouTube Abangakwenzela Kona
Ngaphandle kokuthi ufuna ukwakha isiteshi sakho ngokuthembela kuphela kwababhalisile be-YouTube, maningi amathuba okuthi uzofuna ababhalisile be-YouTube bangempela besiteshi sakho. Umqondo wokusebenzisa ababhalisile be-YouTube kufanele kube ukusebenzisa izinombolo ukukhulisa ukukhula kwesiteshi sakho. Leli ithuba lizoheha ababhalisile be-YouTube bangempela abazoqala ukusebenza, bahlanganyele nokuqukethwe kwakho.
Konke okwenzayo lapho uthola ababhalisile be-YouTube, ukuzama ukwandisa ukuvezwa okuqukethwe kwakho okuthola endaweni yesikhulumi. I-algorithm ye-YouTube mancane amathuba okuthi inyuse okuqukethwe kwakho ngaphandle kokuthi ithole umphakathi onentshisekelo kokuqukethwe kwakho. Futhi njengoba kukhona abadali bokuqukethwe abadumile cishe kuyo yonke i-niche ku-YouTube, lokhu kubeka abadali bokuqukethwe abasha engcupheni.
Uma ungumuntu obenesiteshi se-YouTube isikhashana kodwa uthole impumelelo encane ekuletheni imibono nokuthandwa. Ngemuva kwalokho ungazuza nangokuthola ababhalisile be-YouTube. Uma uthola ukuthi awusatholi ababukeli, maningi amathuba okuthi ividiyo yakho ayinconywa kunoma ngubani futhi ayitholi ukuvezwa okwanele. Ababhalisile abambalwa be-YouTube nsuku zonke esikhathini esikhethiwe bangathola i-algorithm yokucabanga ukuthi okuqukethwe kwakho kuyavezwa, ngakho-ke kudinga ukuthi kuthuthukiswe.
4. Yakha Ukudonsa Kwakho
Ukuphumelela ku-YouTube ekugcineni kwehla ngekhwalithi yokuqukethwe kwakho. Ungaba nezigidi zababhalisile be-YouTube, kepha ngaphandle kokuqukethwe kwekhwalithi ephezulu, ngeke uthole ukudonsa okufunayo kubabukeli bangempela. Futhi njengoba ababukeli bangempela nokukhula okuqinile kungukuvumela ukuthi ufinyelele emigudwini yesikhulumi, kuyindlela enhle yokwenza umfutho uhambele isiteshi sakho.
Lapho usuthuthukise inani elithile lokuchayeka nokudonswa kwesiteshi. yenza imali ngokuqukethwe kwakho futhi uze ubambisane ne-YouTube. Ukuqalisa umfutho wokuqala yilokho okungahlukanisa isiteshi sakho se-YouTube nokwehluleka nempumelelo. Yilapho ababhalisile be-YouTube bamahhala bengakusiza khona.
Ngasikhathi sinye, akufanele uthembele kakhulu kubabhalisi be-YouTube, kepha kunalokho sebenzisa usizo lwabo ukukhuthaza impumelelo yakho.
5. Ungakhohlwa Ngokuqukethwe
Okuqukethwe okudalayo yilokho okuzokusiza ukwakha isiteshi esihlala njalo ku-YouTube. Ukugxila kokuqukethwe kwakho, nokusebenzisa ababhalisile be-YouTube eceleni ukukhulisa lokho kubonakala kokuqukethwe kungakusethela impumelelo. Kufanele uhlale ufuna lowo mkhawulo, ngemuva kwawo okulandela ukubuka kwangempela, ababhalisile nokuthandwa okulandelayo.
Noma kunjalo, abadali abaningi bokuqukethwe bavame ukukhohlwa ukudala okuqukethwe okuhle. Esikhundleni salokho, bathembela ezinombolweni zababhalisile be-YouTube nokuthandwa yi-YouTube ukubanikeza ukubonakala kwempumelelo. Uma lokhu kwenzeka, kungabonakala kubabukeli bangempela abasebenzisi bengxenyekazi ukuthi ukubonakala kwakho kuvela kwababhalisile nabathandwayo mahhala. Uma lokhu kwenzeka, abaningi ababhalisile bangahle bakhathazeke ngokuzibandakanya nokuqukethwe kwakho.
Uma unokuqukethwe kwekhwalithi ephezulu nokho, ungazisebenzisa ngempumelelo izinombolo ozithola ngokusebenzisa ababhalisile bakho be-YouTube nokuthandayo, ukuze sikhule isiteshi sakho.
6. Ukungasebenzisi Ezinye Izindlela Ukukhulisa Isiteshi Sakho
Ngenkathi ababhalisile be-YouTube nokuthandwa yi-YouTube kungakusiza ukukhulisa isiteshi sakho, akuyona ukuphela kwendlela ongayithola. Yize kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokukhulisa isiteshi sakho se-YouTube, uzothola impumelelo enkulu uma usisebenzisa namanye amasu.
Ngakho-ke uma usuvele uthola ababhalisile be-YouTube, ungasebenzisa futhi amasu afana nokuphana, imincintiswano namakhuphoni ukuthola ababhalisile bangempela besiteshi sakho. Ngaphandle kokudonsela ukunaka kwababhalisele isiteshi sakho, ufuna futhi ukugcina ukunakwa kwabo. Lokhu kwandisa amathuba okuthi babhalisele isiteshi sakho.
Ukusebenzisa ukupha, ukubonga abantu ngokusiza isiteshi sakho sikhule, nokuthola ezinye izindlela zokuzibandakanya nezibukeli zakho kungavumela ukukhula okusheshayo kwesiteshi sakho.
Kufanele Uqhubeke Isikhathi Eside Kangakanani Ukubhalisela Ababhalisile Be-YouTube Ukukhulisa Isiteshi Sakho?
Uma uqala ukuthola ababhalisile bakho be-YouTube esiteshini sakho, ungazizwa uthokozile ngokuthi umfutho ekugcineni uzosenzela isiteshi sakho. Ngakho-ke ake sithi inyanga iyadlula futhi isiteshi sakho sikhula kangcono kunalokho obukulindele. Ingabe lesi yisikhathi esifanele sokuyeka ukuthola usizo kwababhalisile be-YouTube.
Impendulo efanele ukuthi kufanele uhlale uthembele kubabhalisi be-YouTube kuze kube nini futhi ukuthanda kwe-YouTube kuncike ezintweni ezahlukahlukene.
Ingabe okuqukethwe kwakho kuku-niche ethandwayo, futhi kungakhanga ukubukwa okwanele ngokwakho njengamanje?
Uma okuqukethwe kwakho kuku-niche ethandwayo, uyaqiniseka ukuthi ungadonsa izixuku kubadali bokuqukethwe abadumile ku-niche yakho?
Uma okuqukethwe kwakho kuku-niche engacacile, okuqukethwe kwakho kukuthola kangakanani ukulandelela okuvela kubabukeli bangempela?
Ingabe uzizwa unethemba elanele lokuthi ungaqhubeka nokukhulisa isiteshi sakho se-YouTube ngaphandle kosizo lwababhalisile be-YouTube.
Izimo zomuntu ngamunye zinezwi lokuthi kufanele uhlale uthembele kubabhalisi be-YouTube isikhathi esingakanani. Kodwa-ke, noma ngabe okuqukethwe kwakho kusadinga ukukhuthazwa ukuze kutholakale ukudonsa nakho kuyisici esinqumayo.
Lokhu kusho ukuthi ungathembela futhi ukhethe ukuyeka ukuthembela kubabhalisi be-YouTube noma kunini lapho ufuna khona. Ungacela futhi ababhalisile be-YouTube ngokuhamba kwesikhathi, uma uyidinga.
Nge-SoNuker, ungathembela kalula kubabhalisi be-YouTube abakhululekile. Bona izinombolo zakho zikhuphuka inyanga, bese uma ucabanga ukuthi ungaqhubeka nokukhulisa isiteshi sakho wedwa, kuhle lokho! Kwesinye isikhathi, abantu basebenzisa ababhalisile be-YouTube nokuthandwa kwe-YouTube ngezinhloso ezithile zokuphakamisa eyodwa, noma amavidiyo ambalwa.
Ukuthi udinga ukuvezwa kanjani nokuthi ungabasebenzisa kanjani ababhalisile be-YouTube ukukhulisa isiteshi sakho kuncike kuwe. Kodwa-ke, uma kwenzeka uzithola udinga usizo lwababhalisile be-YouTube nokuthandwa yi-YouTube, ungahlala uthembele kuSoNuker ukuthi akusize.
Kungani Abantu Bekhetha Ababhalisile Abamahhala be-YouTube?
Indlela eya empumelelweni ingaba nzima, futhi ku-YouTube, ubunzima bandiswa umncintiswano. Abantu bavame ukuthembela kubabhalisi be-YouTube njengendlela yokulinganisa inkundla yokudlala, ikakhulukazi uma bengabakhi bokuqukethwe abasha.
Lokhu kwenzeka ukuthi ukuqashelwa kungxenyekazi efana ne-YouTube kungaba nzima kakhulu. Kodwa-ke, uma nje uqaphele futhi i-algorithm ye-YouTube iqala ukuncoma nokuphromotha amavidiyo akho, impumelelo ingalandela ngokwemvelo. Futhi ngeSoNuker, ungathola abalandeli beqiniso ongabasiza nabo ekuvulekeni.
Ngokukhetha ukungakhethi ababhalisi be-YouTube abakhululekile kuphela, ungalawula impumelelo yakho ngezinga elithile. Cabanga ngokwakha okulindelwe okungokoqobo mayelana nokuthi ababhalisile be-YouTube bangakusiza kanjani ukukhulisa isiteshi sakho. Ngaleyo ndlela, ungazithola ukhula futhi ukhula ngokushesha kunalokho obekulindelekile.
Abalandeli abafanele be-YouTube nokuthandwa kwe-YouTube okungaguquguquki kungakusiza ukusetha isiteshi sakho sibe yimpumelelo. Esikhundleni sokulinda i-algorithm ye-YouTube ukuthi ibone okuqukethwe kwakho, kungani ungakumemi lokho kuvezwa kuwe.
Ukusebenzisa ababhalisile be-YouTube kancane, njengokuthola ababhalisile abayishumi kuya kwabangamashumi amabili ngosuku kungasiza isiteshi sakho sikhule. Lokhu kunikeza umbono wokukhula kwangempela, futhi kungakhuthaza ababukeli bangempela ukuthi babhalisele isiteshi sakho.
Ngasikhathi sinye, awukwazi ukukhohlwa ngokuthola ukuthandwa kumavidiyo akho. Ukuthandwa namazwana kukhombisa ukuzibandakanya kwesiteshi sakho, futhi kuyizinkomba zokukhula. Uma amavidiyo akho engakakutholi ukuthandwa okudingayo, lokho okuthandwa yi-YouTube kungakuxazululela inkinga.
Uma usebenzisa ipulatifomu ye-SoNuker ukuthola ababhalisile be-YouTube, akudingeki ukhathazeke ngama-bots noma amazwana ogaxekile avele njalo kumavidiyo akho. Esikhundleni salokho, ungathembela kubabhalisi bakho be-YouTube ukuthi bakunike nokuthandwa yi-YouTube. Ku-YouTube, ukuthanda nokubukwa kubaluleke kakhulu. Ukuba nokuthandwa okuningi kunalokho ongakuthandi nokusakazeka okuqhubekayo kwababhalisile abasha yikho konke okudingayo ukuze ukhulise isiteshi sakho ku-YouTube.
Ungathembela futhi kuSoNuker ukuthi ikusize ufunde ukuthi ungayisebenzisa kanjani insiza yethu ukwenza ngcono impumelelo yakho. Kala ijubane lokukhula kwesiteshi sakho futhi ube yi-YouTuber edumile ngosizo lwababhalisile bamahhala. Ungayeka nokusebenzisa amasevisi wethu noma kunini lapho uzwa sengathi awusadingi lutho, noma uwasebenzisele ukuphromotha amavidiyo athile noma izingcezu zokuqukethwe.
Yize kunamaphutha amaningi ongawenza lapho uthola ababhalisile be-YouTube, ukuqapha okunempilo kungakusiza ukuwagweme. Kusukela ekukhetheni ipulatifomu elungile, njengeSoNuker, ukukunikeza ababhalisile be-YouTube, ukwazi ukuthi ungazisebenzisa kanjani izinombolo ukuze uphakamise impumelelo yakho. Qala ukwakha indlela eya emaphusheni akho e-YouTube nge-SoNuker namuhla.
I-3huwari kaJanuwari 2022
Umhlahlandlela omfushane wokumaketha we-YouTube
Isizinda senkundla yezokuxhumana sinabadlali abaningi - i-Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, kanye neReddit ukusho abambalwa. Ngokuphambene nalokho,...
I-24th NgoDisemba 2021
Ungakwenza Kanjani Okuhle Ngesici Se-VR Se-YouTube Ukuze Uzuze Abalandeli Abathe xaxa
I-VR, noma i-Virtual Reality, iwukuqanjwa okusha kwezobuchwepheshe okunikeza ababukeli umbono wokubuka kuqala isenzo. I-virtual reality ayipheleli ezingeni eliphezulu...
I-2nd Disemba 2021
Amathiphu okuthola ababhalisile be-YouTube abengeziwe ukuze bakunikeze "Super Thanks"
Ngomhla zingama-21 kuJulayi 2021, i-YouTube yaphuma nesici esisha esinikeze abadali bokuqukethwe enye indlela yokwenza imali ku-YouTube. I...
Sebenzisa ifomu le-oda elisheshayo ngezansi
Izinketho zokuthenga zesikhathi esisodwa ngaphandle kokubhaliselwe noma inkokhelo evela njalo.
Amahora Wokubuka we-YouTube
Izikhungo Ababhalisile be-YouTube abangu-50 ($ 20) Ababhalisile be-YouTube abangu-100 ($ 30) Ababhalisile be-YouTube abangu-300 ($ 45) Ababhalisile be-YouTube abangu-500 ($ 60)
Ukulethwa Okuphephile Nangasese
Ukulethwa KUQALA ngamahora angama-24-72
Ukulethwa Kuyaqhubeka nsuku zonke kuze kuqede
I-Delivery SPEED: Ababhalisile abangu-10-100 ngosuku
Izikhungo Ukubuka kwe-YouTube kwe-1000 ($ 20) Ukubuka kwe-YouTube kwe-5000 ($ 60) Ukubuka kwe-YouTube kwe-10000 ($ 100) Ukubuka kwe-YouTube kwe-25000 ($ 200) Ukubuka kwe-YouTube kwe-50000 ($ 350) Ukubuka kwe-YouTube kwe-100000 ($ 600)
Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini
Izikhungo Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-100 ($ 13.50) Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-200 ($ 20) Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-300 ($ 25) Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-600 ($ 40) Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-1200 ($ 70) Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-2500 ($ 140) Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-5000 ($ 270) Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-10000 ($ 530) Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-15000 ($ 790) Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-20000 ($ 1050) Ukuthandwa kwe-YouTube kwe-30000 ($ 1550)
Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini
Izikhungo Amazwana we-YouTube Custom 10 ($ 20) Amazwana we-YouTube Custom 20 ($ 35) Amazwana we-YouTube Custom 30 ($ 50) Amazwana we-YouTube Custom 50 ($ 80) Amazwana we-YouTube Custom 100 ($ 140)
Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini
Izikhungo Amahora wokubuka we-YouTube we-500 ($ 180) Amahora wokubuka we-YouTube we-1000 ($ 300) Amahora wokubuka we-YouTube we-2000 ($ 450) Amahora wokubuka we-YouTube we-3000 ($ 550)
Izikhungo Izinsiza ze-YouTube ze-500 ($ 30) Izinsiza ze-YouTube ze-1000 ($ 50) Izinsiza ze-YouTube ze-2000 ($ 80) Izinsiza ze-YouTube ze-5000 ($ 130) Izinsiza ze-YouTube ze-10000 ($ 250)
Joyina amalungu angama-500,000 + asevele esebenzisa i-SoNuker ukuthola ababhalisile be-YouTube mahhala nokuthandwa kwamavidiyo namuhla!
Thola Ukuthandwa kwama-YouTube kwamahhala
I-SoNuker inikeza uhlu olubanzi lwezinsizakalo zokumaketha ezokuxhum kanye nenethiwekhi yokuthengisa yokuthola ababhalisile be-YouTube mahhala nokuthandwa kwama-YouTube kwamahhala.
Ungabakhuthaza Kanjani Ababhalisile bakho be-YouTube ukuthi Bahlale Ngamavidiyo Amade
Amathiphu ashisayo okwenza amavidiyo akhuthaza ukubukwa nokulondolozwa kwe-YouTube okwengeziwe